Qalabka OpenStreetMap u soo wareeji QGIS - Gofumed
Luulyo, 2015 Geospatial - GIS, qgis
Xaddiga macluumaadka ee jira OpenStreetMap runtii waa mid ballaaran, inkastoo aysan si buuxda u sarreynin, xaaladaha intooda badani waxay ka saxan yihiin xogta sida caadiga ah loo soo ururiyey iyadoo la adeegsanayo xaashida sawirrada leh ee cabbirka 1: 50,000.
QGIS waa wax weyn in lakalaan galka asalka khariidada sida muuqaalka Google Earth, kuwaas oo horayba u jirey, laakiin tani waa khariidad taariikheed oo keliya.
Maxaa dhacaya haddii aad rabto in aad leedahay lakabka OpenStreetMap sida vektor?
1 Soo qaado xogta OSM
Si taas loo sameeyo, waa inaad doorataa meesha aad ka filaneyso inaad soo dejiso xogta. Waa cadahay in goobo aad u ballaaran, halkaas oo ay jiraan macluumaad badan, baaxadda xogta waxay noqon doontaa mid aad u weyn oo gaabis ah. Si arrintan loo sameeyo, waxaad dooraneysaa:
Wareeg> OpenStreetMap> Download
Halkan waxaad dooranaysaa waddada halka faylka xml ah la kordhin doono .osm. Waxaa suurtagal ah in la tilmaamo kala duwanaanta tiirarka laga sooco lakabka hadda jira ama muuqaalka muuqaalka hadda. Marka xulashada la doorto aqbalaan, geeddi-socodku wuxuu bilaabmayaa bilawga iyo mugga xogta la soo dejiyey ayaa la soo bandhigaa.
2 Samee Database
Marka faylka XML la soo dejiyey, waxa loo baahan yahay waa in loo badalo xogta.
Tani waxaa lagu sameeyaa leh: Wareegtada> OpenStreetMap> Iibinta topolojka laga helo XML ...
Halkan waxaa laga codsanayaa in aan soo galno ilaha, feylka DB SpatiaLite iyo haddii aan rabno in xiriirka soo dejinta si deg deg ah loo abuuro.
3 U daa lakabka QGIS
Wicitaanka xogta sida lakabka u baahan:
Wareeg> OpenStreetMap> Dhoofinta topoloji ee SpatiaLite ...,
Waa in la tilmaamaa haddii aanu ku wici doonno kaliya dhibcaha, khadadka ama garaannada. Sidoo kale leh badhanka load ee database-ka waxaad ku qori kartaa kuwaas oo ah waxyaabaha xiisaha leh.
Natiijo ahaan, waxaan ku dari karnaa lakabka khariidadeena, sida muuqata sawirka soo socda.
Dabcan, maaddaama OSM uu yahay qorshe banaan oo furan, waxay noqon doontaa waqti dheer qalab khaas ah oo lagu sameeyo noocaan oo kale ah.
Post Previous«Previous JOSM - CAD A xogta tafatirka ee OpenStreetMap
Post Next Isku xirnaanta Jinsiyadaha - Maadada Geomatics ee Bandhiga Sayniska Cilmiga Computerka 2016Next »